QM oo soo dhawaysay tallaabo uu qaaday RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - War-saxaafadeed uu soo saaray xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyey tallaabadii uu shalay qaaday Ra’iisul Wasaare Rooble, oo ah magacaabida guddiga ilaalinta qoondada haweenka ee 30%, doorashooyinka golayaasha Barlamaanka labada aqal.
“Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhoweyneysaa magacaabista uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble,13 xubnood oo ah guddi u qareemis, kaas oo ka shaqeynaya xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30% ee kuraasta baarlamaanka federaalka ay haweenku ku yeelanayaan,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Qaramada Midoobay ay si buuxda u taageerayso ka qeybgalka haweenka Soomaaliyeed iyo matalaadkooda doorashooyinka soo socda.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shalay magacaabay guddi xaqijinaya qoondada haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyhiin kuraasta Baarlamaanka 11-aad, kaas oo la filayo in ay dhawaan doorashadiisu ka billaabato dalka.
Guddigaan oo ka kooban 13-ka xubnood waxaa ku jira hal rag ah halka inta kale ay dhamaantood yihiin dumar, waxaana guddoomiye looga dhigay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ku magacaaban guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed.